FBSတွင် ပါတနာနှင့် ဖောက်သည်များအချင်းချင်း တိုက်ရိုက် ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့နိုင်ပြီ
FBSပါတနာများ ငွေလွှဲရာတွင် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေမည့် အစီအစဉ်ဖြစ်သည့် ပါတနာအကောင့်မှတဆင့် ထိုအကောင့်၏ ဖောက်သည်များထံသို့ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကို နိုဝင်ဘာလ 10ရက်နေ့မှစတင်၍ FBSတွင် စတင်ဝန်ဆောင်ပေးနေပါပြီ. ဤ၀န်ဆောင်မှုကိုရယူအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့် ပါတနာအကောင့်မှတဆင့် သင်၏တိုက်ရိုက်ဖောက်သည်များထံသို့ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲနိုင်ပါလိမ့်မည်.
ထို့ကြောင့် FBS၏ "အိတ်ချိန်းဂျာ Lite" အကောင့်အားလုံးကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားပြောလိုပါတယ်. ထိုအကောင့်များသည် နိုဝင်ဘာ ၈ရက်နေ့တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါမည်. ထိုကာလနောက်ပိုင်းတွင်တော့ သင့် ပါတနာအကောင့်မှတဆင့် သင်၏တိုက်ရိုက်ဖောက်သည်များထံသို့ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲနိုင်ပါလိမ့်မည်.
သင့်ဖောက်သည်များကိုငွေဖြည့်ပေးရန် EXLအကောင့်ကိုအသုံးပြုနေပါက သင့်ရဲ့ငွေကြေးအားလုံးကို အခြားအကောင့်သို့ အမြန်ဆုံးလွှဲပြောင်းထားပါရန်. နိုဝင်ဘာ 10ရက်နောက်ပိုင်း သင့်EXLအကောင့်တွင် ငွေလက်ကျန်များကျန်ရှိနေသေးပါက ထိုငွေကြေးအားလုံးကို သင့်ရဲ့FBSပါတနာအကောင့်သို့ အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးချယ်ပေးတဲ့အတွက် မိတ်ဆွေတို့ကိုကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်!